Tuesday September 06, 2016 - 09:07:38 in Wararka by Super Admin
90% Khudaarta laga isticmaalo Magaalooyinka Puntland Maamusho waxaa laga daabulaa Koonfurta Soomaaliya.
Xayiraaddan dhanka ganacsiga ah ee kajirta gobollada isku xira soomaaliya inteeda kale ayaa timid kadib markii maamulka Puntland isku magacaabay uu awaamir ad-adag kusoo rogay darawallada gaadiidka.
Wareegto kasoo baxay Madaxweyne ku xigeenka maamulka ‘Puntland’ ayaa lagu mamnuucay in gaadiidka badeecadaha ka qaaday Koonfurta Soomaaliya aysan dhaafi Karin waqooyiga magaalada Gaalkacyo halka gaadiidka badeecadaha kasoo daabula dekadda Boosaaso aysan dhaafi Karin waqooyiga Gaalkacyo taasi oo ka dhigan cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed.
Xayiraaddan uu soo rogay maamulka Puntland isku magacaabay ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalooyinka Boosaaso,Garowe iyo Qardho oo ka sheeganaya khudaar yari baahsan.
Wareegtada kasoo baxday maamulka ‘Puntland’ ayaa dhigeysa in gaadiidka ka yimaad Koonfurta Soomaaliya uu badeecado ku dajiyo waqooyiga Gaalkacyo kadibna waxaa kasii daabulaya gaadiid dhanka Boosaaso iyo Garowe ka imaanaya.
Tillaabadan gurrucan ayaa lagu macneeyay dhaqaale abuuris hor leh oo loogu danaynayo ganacsato uu wato maamulka ka arrimiya magaalada Garowe wuxuuna maamulkaasi ku tumanayaa hantida kumanaan kamid ah ganacsatada soomaaliyeed ee kasoo jeeda dhammaan gobollada dalka.
Guddi ay ku midaysanyihiin ganacsatada ayaa sheegay in 45 gaari oo nuuca xamuulka ah ay ku xayiranyihiin Gaalkacyo islamarkaana uu jiro khasaara lixaad leh oo soo gaaray ganacsatada.
Maamulka Cabdi Wali Gaas ayaa ku andacoonaya in tallaabadan uu u qaaday adkeynta amniga balse ganacsatada shaqadooda la xayiray waxay sheegeen in ay diyaar uyihiin in gaari walba ay rarka ka dajiyaan marka uu gaaro Gaalkacyo kadibna ciidanka Puntland ay baaraan balse maamulka Puntland oo qorsha dhagareed damacsan ayaa dhegaha ka furaystay.
Cameey ku xigeenka Cabdi Wali Gaas oo hadlayay ayaa gaadiidka ku xayiran Gaalkacyo ku sheegay ‘Gaadiid Al Shabaab’ waana mashruuc la doonayo in lagu xalaalaysto hantida shacabka Soomaaliyeed.
Ujeedka dhabta ah ee laga leeyahay qorshahan ayaa ah 1- in dhaqaale loogu abuuro maamulka Mudug ee qeybta Puntland oo aan laheyn il dhaqaale oo fadhida 2- in Puntland ay lacago canshuura dheeri ah ka hesho gaadiidka cusub ee Gaalkacyo kasii daabuli doona badeecadaha ku socda,Boosaaso,Garowe,Qardho illaa iyo Hargeysa islamarkaana fursad shaqo lasiiyo ganacsato ujanjeera dhanka maamulka Puntland.
Dhaqaalayahanada Soomaalida waxay sheegayaan in haddii maamulka Garowe uu kusii adkeysto qorshahan uu hoos udhaca ballaaran ku imaan doono badeecadaha laga dhoofiyo iyo kuwa laga dajiyo dekadda caalamiga Boosaaso oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn gobollada waqooyi Bari Soomaaliya.
Tusaale ahaan inta badan xoolaha nool ee soomaalidu u dhoofiso wadamada Khaliija badanaa waxaa laga dhoofiyaa dekadda Boosaaso gaar ahaan xoolaha ka yimaada gobollada Dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
60% badeecadaha laga isticmaalo gobollada dhexe ee Soomaaliya waxay ka yimaadaan dhanka Boosaaso waana cunaqabateyn hor leh oo maamulka Puntland uu isku rogay isaga oo aan qiimeyn xaaladdiisa dhaqaale. Soomaalidu waxay ku hal qabsataa "waxbadso Waxbeel ayay leedahay”.
Dekadaha Boosaaso iyo Kismaayo waa ugu rakhiisan dhanka canshuuraha marka loo eego canshuurta xad-dhaafka ah ee laga qaado maraakiibta kusoo xirta dekadaha Muqdisho iyo Berbera.